Ra'iisul Wasaare Rooble oo amray in si degdeg ah loo soo qabto dadkii laayay saraakiisha - Home somali news leader
Home NEWS Ra’iisul Wasaare Rooble oo amray in si degdeg ah loo soo qabto...
Ra’iisul Wasaare Rooble oo amray in si degdeg ah loo soo qabto dadkii laayay saraakiisha
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka dalbaday Madaxda Maamulka Galmudug iyo hey’adaha amniga in si degdeg ah gacanta lagu soo dhigo dadkii kan dambeeyay dilka saraakiishii ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay in dadka ka dambeeyay falkaas ay ahaayeen dad arxan laawayaal ah oo diidan horumarka socda, isagoo xusay in saraakiisha la dilay ay ahaayeen kuwo u adeegayo bulshadooda.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay gacan ku siin doonto Galmudug dadkii ka dambeeyay falkaas sharciga loo horkeeni lahaa.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulamo ka wada magaalada Dhuusamareeb, waxaana uu maamulka Galmudug, saraakiisha ciidamada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kala hadlayaa arrimaha amniga, horumarka, dib u heshiisiinta iyo arrimo kale.
Waxaa la filayaa in Ra’iisul Wasaaraha uu kormeero ku tago deegaano ka tirsan Galmudug, si uu ugu kuur galo xaalada deegaanada Galmudug.
Previous articleWasiir Xundubey “Dad wax ma garato ah oo qoryo wata ayaa la soo abaabulay”
Next articleEurope faces stricter Covid-19 restrictions amid fears of rising Christmas